Kungani emshadweni bakhala kakhulu
Abantu abaningi abacabangi ngisho nokuthi kungani umshado ukhala ngokukrakra, kuyilapho kunezincazelo eziningi ezithakazelisayo zomsuka walesi siko. Kuze kube manje, izazi-mlando azifinyelelanga umbono ovamile ukuthi yimiphi imibono ekhona eqinisweni. Mhlawumbe lokhu kusho ukuthi bonke banendawo yokuhlala futhi badlala indima encane ekuvikeleni isiko elingavamile sokukhamuluka kabi emshadweni.
Inguqulo yokuqala yemvelaphi yesiko lokumemeza "ngokubabayo", ukuxosha abashadile abasanda kumanga, kusekelwe emidlalweni yasendulo yaseRussia. Uma ukugubha komshado kwenzeka ngesikhathi sasebusika, kwakudingeka kube umkhosi omkhulu, ukuzila ukudla kwakuphelile nje, futhi kwavunyelwa ukuba ugubha. Ngakho-ke, abazali baphuma emasimini egcinwe ezindaweni ezigciniwe ezigciniwe kanye namatafula e-chic ahlanganisiwe. Phakathi naleso sikhathi, abantu abasha baqhwabalala.
Kwakuthathwa kude nendlu yomakoti yokwakha islayidi enkulu yeqhwa, bese uwathululela ngamanzi kuze kube yilapho iqhwa lenziwa khona. Lapho lo mbhangqwana efika ukuthatha umakoti wakhe, enye yezithiyo ezendleleni yakhe yileli gquma. Umakoti ohlakaniphile nabangane bakhe bakhuphukela esiqongweni sentaba bese bebheka umkhwenyana. Ngalokho, oshade naye ozayo nabangane kwakudingeka anqobe le ntaba, futhi kwakunzima kakhulu ukwenza lokhu endaweni ebusayo. Lapho le nsizwa isifinyelele, ngokufanelekile wathola umvuzo ngendlela yobumnandi obuthandayo obathandekayo bakhe. Abangane bomkhwenyana nabo abazange bahlale bengalindelwe, njengoba befuna ukunxusa intombazane ayithandayo . Khona-ke bonke baqoqa islayidi slide kanye namazwi omemeza ethi "Hill!".
Inguqulo elandelayo ichaza ukuthi kungani umshado ukhala ngokubabaza. Nakulokhu, ngezikhathi zakudala waseRussia, lo wesifazane wayebhekwa njengendoda egcwele etafuleni, umsebenzi wakhe kwakuwukuvuselela izivakashi futhi zimukele kahle. Ukugubha umshado, lo mfelokazi osemncane wabonisana nesithameli ngasinye ngesibonga sakhe futhi wabonisa inhlonipho eyayibachitha bonke abantu ngebheyi, enikeza i-vodka. Isivakashi, naye, kwakudingeka siphuze amandla okugcwele. Ngemva kwalokho isakhamuzi samemeza kakhulu: "Kuyabuhlungu!", Ukufakazela ukuthi wayiphuzile ngempela i-vodka, hhayi amanzi. Kulesi simo, isivakashi ngasinye singabeka imali emgodini, siphuze i-vodka futhi njengendlela yokunambitheka kiss kiss umakoti. Lowo ongazange akhokhe kwakungenakho umvuzo futhi uthola ingilazi ye-vodka kuphela. Eziningi zalokhu kuvunyelwa kwakubhekwa ngokungalungile, yingakho bethinta le ntombazanyana kuzo zonke izindawo ezithambile, futhi babekwazi ukumanga ezindlebeni, ku-decollete, nasezindebe. Konke kwakuxhomeke ekungeneni kwesimenywa esiphendukayo.
Yiqiniso, isiko elinjalo asikwazanga ukuhlala isikhathi eside, ngoba akubona wonke umkhwenyana ongamelana nokuvivinya okunamandla ngenxa yomhawu. Ngelinye ilanga umfana osemusha wayengenakukumelela futhi wanikeza isivakashi ithuba elihle. Kancane kancane lesi siko sishintshile, futhi kukhononda: "Ukukhathazeka!" Umkhwenyana wanikela kumkhwe wakhe. Futhi ngemva kwalokhu kwakukhona isiko lokuphoqa labo abasanda kushada isikhathi eside futhi bewanga ngothando ngaphansi kokukhamuluka kwenjabulo.
Yebo, inguqulo yesithathu yemvelaphi yesiko ichaza ukuthi kungani umshado ukhala kabi, kanje. Abantu bekholo lobuhedeni babekholelwa ukuthi imimoya emibi yayihlala ihamba eduze, inhloso yayo yayiwukulimaza injabulo yezwe yabantu bonke. Ngakho-ke, bazama ukukhuluma lo mcimbi ojabulisayo. Kuze kube sekugcineni, zonke izihambeli ngezikhathi ezithile zamemeza: "Babuhlungu!", Ukutshela imimoya ukuthi kulesi sidlo ukudla okungenakusihlwa, iziphuzo ezibabayo nokuphila kanzima. Ngokwezinkolelo zobuqaba, wonke amandla angcolile azungeze indlu ngalesosikhathi ayancipha futhi wabuyela ekhaya. Isikhathi sidlula futhi izivakashi zomkhwenyana zibuhlungu ngenxa yokuhamba kwakhe emndenini omusha ngokukhala okukhulu, futhi umakoti ngesikhathi esifanayo wamanga, efakazela ukuthi empilweni yomndeni esikhathini esizayo wayezoba mnandi kuphela.
Ngenye yezincazelo ezihlongozwayo, kungani umshado ukhala ngokukrakra, kungukuthi ukukholelwa. Kodwa kisses emshadweni sekuyisiko lamazwe amaningi, okubhekwa kuze kube yilolu suku.
Uyini kwegazi: inshokutsi lingavumelani yokukhuluma
I izwi elithé ukuphakama kwelinye lamagumbi umthwalo "idasta"
Kusukela sizogqokani isikibha esimhlophe? Izithombe izincomo
Imiyalo yokuqhathanisa amafayela amabili eZwi
Ngamunye: definition. Man, umuntu ubuntu
Design - Iyini? izimiso design
Kungani lokhu usosayensi izingcingo ukukhwabanisa, ucwaningo kakhulu umdlavuza?
Luhlatiyo izinkondlo Pushkin futhi Lermontov, Tiutchev futhi feta
Akusho ubuhlungu ukulahlekelwa ubuntombi? Izindlela eziyinhloko ukusiza ukwehlisa ubuhlungu
Irekhodi yezokwelapha okuqhubekayo. Ukubekezelela abanolwazi kwezokwelapha okuqhubekayo